12 taona : mitaiza ankizy sembana 150 isam-bolana ny Fanarenana | NewsMada
12 taona : mitaiza ankizy sembana 150 isam-bolana ny Fanarenana
« Manamarika ny faha-12 taona nijoroany ny fikambanana Fanarenana. Asa sahaniny ny fandraisana an-tanana ny ankizy manana fahasembanana na ara-batana na ara-tsaina mila fitsaboana na fandidiana hatramin’ny « reéducation » indrindra ireo avy amin’ny fianakaviana marefo ara-pivelomana », hoy ny filohan’ny fikambanana, Patrice Raoul, ny faran’ny herinandro lasa teo, teny Antanimena. Efa manana foibe fandraisana ny ray aman-dreny sy ny ankizy manana fahasembanana izy ireo, eny Ampasanimalo-Tsiadana tao anatin’ny 10 taona. Manohana ny asa ny Vondrona eoropeanina sy ny governemanta frantsay. Mangataka fandraisana anjara kely koa amin’ny fianakaviana manana zanaka tonga ao amin’ny foibe ka arakaraka ny fahasahiranana ny vola aloa. Ho an’ny ankizy marary mila fandidiana na fitsaboana mavesatra, mangataka fanampiana manokana isaky ny tranga ny tomponandraikitry ny Fanarenana.
Manohana ny ezaky ny fikambanana ny minisiteran’ny Fanabeazana amin’ny fampidirina ny ankizy manana fahasembanana any an-dakilasy. Tanjona ny handraisana izy ireny eny anivon’ny EPP na CEG mahazatra ny zana-bahoaka, fa tsy atokana amin’ny sekoly ho an’ny manana fahasembanana, hoy ihany ny filoha. 150 isam-bolana ny ankizy raisina an-tanana na koa araha-maso ny fahasalamany. Tohanana mandra-pahaleotenany ny ankizy tsirairay.
Vinan’ny fikambanana ny ho lasa centre de réference amin’ny fitsaboana sy ny fanofanana ny ankizy manana fahasembanana ho an’ny 10 taona manaraka. Mampiasa kinésithérapeute, mpitsabo momba ny tongotra, mpanabe manokana… mikarakara ireo ankizy manana fahasembanana ny association.
Mahatsapa ity mpitantana ity fa tokony hanao ezaka ny fanjakana hijery ny olona manana fahasembanana. Efa nankato ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon’ny olona manana fahasembanana isika fa ny fampiharana sisa andrasana.